Kushandura Power Supply
PFC Basa reSimba Supply
Vakachena Wave Inverter With Charger
Modified Sine Wave Inverter Nechaja
Sravana Sameeralu Serial 4th Hot News
Kushandisa kwe AC-DC Kushandura Simba Rekupa Chip muKushandura Simba reKugovera
na admin pa 21-11-18
Kuchinja magetsi ndiko kushandiswa kwemagetsi ekuchinja zvinhu senge transistors, field effect chubhu, silicon controlled rectifier thyratron, zvichingodaro, kuburikidza nedunhu rekutonga, magetsi emagetsi anogara ari "pa" uye "akadzimwa", ita zvemagetsi switching devic. .
Classification, kuumbwa uye kushanda musimboti we solar photovoltaic system
na admin pa 21-11-13
Solar photovoltaic masisitimu anonyanya kukamurwa kuita off-grid photovoltaic simba rekugadzira masisitimu uye grid-yakabatana photovoltaic magetsi ekugadzira masisitimu. 1. Iyo off-grid photovoltaic power generation system inonyanya kuumbwa ne solar cell components, controllers, uye mabhatiri. Kana iwe uchida ...
Single pole switch yekuvhenekesa switch
na admin pa 21-11-08
Bipolar switches inoshandiswa pakuvheneka switch uye inogona kushandiswawo socket power switch. Yakatemerwa zvinoenderana nezvinodiwa, imwe-pole switch inogona kungodzora mutsara mumwe chete, uye kaviri-pole switch inogona kudzora mitsara miviri zvakasiyana. Imwe-pole switch inochengetedza hafu yevhoriyamu ichienzaniswa ...
Ruzivo rudiki rwekuchinja magetsi
na admin pa 21-11-03
Nekuzivikanwa kwemidziyo yemagetsi, kushandura magetsi kunoshandiswa zvakanyanya muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, uye inzira yakakosha yekugovera magetsi. Ipapo mupepeti anozounza switching power supply neminda yayo yekushandisa kwauri. Nekukurumidza kukura kwesimba remagetsi technol ...
National Power Limit Notice
na admin pa 21-10-09
Anodiwa Mutengi Zvimwe wakaona kuti ichangoburwa "mbiri mbiri yekudzora kushandiswa kwesimba" mutemo wehurumende yeChina wakave nemhedzisiro pakukwanisa kwekugadzira kwemamwe makambani ekugadzira, uye kuendesa maodha mune mamwe maindasitiri kunofanirwa kunonoka. Mukuwedzera...
Ruzivo rwekutanga uye basa renjanji inochinja magetsi
Semhando yemagetsi ekushandura muchina nemidziyo, njanji inochinja magetsi inogona kuwanzo kuoneka muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Sekuziva kwemunhu wese, vanhu vazhinji vane nzwisiso shoma yeruzivo rwayo rwekutanga nemabasa. Pano, vanhu vanokutora kuti utore bas ...
Nzira shanu dzekudzivirira kubva pakuvhiya. Hausi kuzozviongorora here?
na admin pa 21-09-26
Zvinonyatsozivikanwa kuti zvigadzirwa zvemagetsi zvinowanzosangana zvisingatarisirwe magetsi ekufamba uye masurges ari mukushandiswa, izvo zvinotungamira mukukuvadzwa kwezvinhu zvemagetsi. Kukuvadzwa kunokonzerwa nemidziyo ye semiconductor muzvigadzirwa zvemagetsi (kusanganisira diode, transistors, SCR uye maseketi akabatanidzwa) ari kupisa ...
Zvakawanda sei zvaunoziva nezve pure sine wave inverters?
na admin pa 21-09-09
Inverter OUTPUT basa: mushure mekuvhura "IVT SWITCH" yepaneru yepamberi, iyo inverter inoshandura yakananga ikozvino simba rebhatiri kuita yakachena sinusoidal alternating current, inova OUTPUT ne "AC OUTPUT" yepaneru yekumashure. Automatic voltage stabilizer func...
Super September Inotanga Nhasi
na admin pa 21-09-01
Vanodiwa Vese, Nhasi ndiGunyana 1, izuva rakakosha kwatiri nekuti "Super Gunyana" inotanga kubva nhasi. Ichagara unitl September 30th, saka panguva ino, kana iwe ukaisa odha pane magetsi, inverter yemagetsi uye solar controller, pachava nekuderedzwa kana chipo chey ...
LEYU Kambani Yakakura Kusimudzira PaGunyana
Vanodiwa Vese, Nekuuya kwaGunyana, isu LEYU kambani tine kukwidziridzwa kukuru kwezvigadzirwa zvedu zvikuru. Kana odha yako ichipfuura US$100.00, chipo chako. Kana odha yako ichipfuura US$1000.00, 2% kubva. Kana odha yako ichipfuura US$10000.00, 5% kubva. Kana odha yako ichipfuura US$30000.00, 10% kubva. The mo...
Maitiro eKuvandudza Dambudziko reKuwedzera Tembiricha Kukwira kweKuchinja Magetsi Supply Transformer
na admin pa 21-06-24
Muchiitiko chaicho chekushandisa, kukwira kwekushisa kwakanyanya kunowanzoitika muMOS chubhu yemagetsi ekushandura uye dhizaini yekushandura pachayo. Nhasi tichatanga kubva pazvinhu zviviri izvi kuti tione kugadzirisa zvinobudirira kukwira kwekushisa kweiyo switching power supply transformer. High pr...
Yekutanga Meanwell Power Supply Yakatumirwa
Isu tiri mugadziri wemagetsi emagetsi kuChina, isu tinogona zvakare kukupa iwe yekutanga Meanwell magetsi emagetsi nemitengo yezvikonzero. Mumwe mutengi wekuIndia akaodha $20000.00 Meanwell magetsi kubva kwatiri, uye anotumirwa nhasi negungwa. Gamuchira kubvunza kwako nezve Meanwell magetsi, isu tichapa ...
12 Zvinotevera > >> Peji 1/2
© Copyright - 2010-2021: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.
Iyo kambani Leyu Electric Co., Ltd.
Pane zvigadzirwa zvaunoda here?
Zvinoenderana nezvaunoda, zvigadzirire iwe, uye kukupa iwe zvimwe zvakakosha zvigadzirwa.
Solar Controller Charger, mbiri inobuda simba rekupa, Simba Inverter 5000w, Simba Inverter, Variable Power Supply, Solar Power Converter,